डाक्टरको डर- विचार - कान्तिपुर समाचार
डाक्टरलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ ।
भाद्र १९, २०७५ डा. ढुण्डिराज पौडेल
काठमाडौँ — चिकित्सा सेवामा तीन पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रदायक चिकित्सक, व्यक्ति या संस्था राज्य या सरकार र सेवाग्राही या जनता । यी अवयवमध्ये चिकित्सकको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा सम्बन्धी कानुन गर्दा जटिलता पैदा भएका छन् ।
उपचारका क्रममा मानवीय गल्ती, कमजोरी हुन सक्छन् । यसलाई निरपेक्ष होइन, सापेक्षमा हेरिनुपर्छ । अमेरिका, भारत लगायत प्राय: सबै देशमा उपचारका क्रममा पैदा हुने नकारात्मकताका लागि विज्ञहरू सहितको टोलीबाट छानबिन गरी सजाय या पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइन्छ ।
अनेक होशियारीका बाबजुद पनि उपचारका क्रममा अमेरिकामा ३० प्रतिशतजति त्रुटि हुन्छ । यस्तै एक लाखमा एक जनाको उल्टो शल्यक्रिया हुने गरेको छ । सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छन्, जसको उचित निरुपण आवश्यक छ ।
नेपालमा उपचारका क्रममा बिरामीमाथि आर्थिक बोझ थप्ने, आफू कार्यरत अस्पतालको सुधारमा उदासीन भई विभिन्न बहानामा निजीतर्फ बिरामी पठाउने जस्ता गलत कार्य बन्द गर्न जरुरी छ । चिकित्सा, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र सम्बद्ध र स्वार्थ गांँसिएका निजी अस्पताल या मेडिकल कलेजबाट चिकित्सकलाई न्यून शुल्क या पारिश्रमिक दिएर अनावश्यक अनुसन्धान, भर्ना, शल्यक्रिया गर्न लगाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रबाट विशेषगरी प्राज्ञिक एवं पेसागत कार्यशाला, गोष्ठी, अधिवेशन आदिमा हुने गरेको प्रायोजनको विकल्प वा व्यवस्थापन जरुरत छ । औषधिको उत्पादन एवं कम्पाउन्डिङमा स्तरीयता र एकरूपता जरुरी छ । जेनरिकको सवाललाई पनि निरूपण गर्न आवश्यक छ ।
चिकित्सकहरूबाट निहित स्वार्थवश यसको विरोध भएको प्रतीत हुनुहुन्न । यस्ता पेसागत एवं चिकित्सकीय इमानदारिता एवं आचारसंहिताका सवालप्रति चिकित्सक गम्भीर हुनुपर्छ । विशेषगरी विगतमा चिकित्सक संघको नेतृत्व सम्हालेका र वरिष्ठ चिकित्सकका अभिव्यक्तिमा आफू संलग्न रहेको या आफ्नो लगानी रहेको संस्थाको हितमात्रै उठ्नु न्यायोचित हुन्न । उनीहरूबाट गरिब र असहायका निम्ति निर्विकल्प बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था सुधारमा किन आवाज उठ्दैन ? मननीय छ ।
उपचार या शल्यक्रियामा बिरामीको सम्मान गर्ने, चिकित्सक–बिरामी प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पारदर्शी हुने, सूचित सहमति लिने, आफ्नोबारे भ्रम सिर्जना नगर्ने र मानवीय भावनाका साथ बिरामीलाई कम भार बोकाउने जस्ता सोचाइ विकास गर्नैपर्छ । माथि उल्लेखित कमी–कमजोरी सहजै हटाउन सकिन्छ । यी कमजोरी अपराधको कोटीमा पर्दैनन् ।
अपराधी कुनै पेसासंँग आबद्ध हुन सक्छ । चिकित्सकको उपाधि लिएकाहरूबाट अपराधकर्म भएका दृष्टान्त छन् । गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गरी गर्भपतनमा उद्यत गराउनेदेखि अंगको तस्करीमा समेत चिकित्सक संलग्न भएका समाचार आउने गरेका छन् । विदेशमा अपराधी मनोवृत्तिका कुनै–कुनै चिकित्सकले हेपाटाइटिस बि, एचआईभी सारिदिने, हत्या तथा बलात्कार गर्ने गरेका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । संगीन अपराधकर्ममा संलग्न भएका कारण कैयौं चिकित्सक जेलमै होलान् । यस्ता अपराधकर्ममा जानी–जानी, बदनियत जस्ता शब्द प्रयुक्त हुनेमा द्विविधा छैन ।
चिकित्सा क्षेत्रको मूल्य, मान्यता, व्यवहार र नियम विपरीत मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३१ मा बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ । बदनियत चिताइ उपचार गर्दा कसैको ज्यानै गए ज्यान मारेसरह र अंगभंग भए अंगभंग गराए सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३९ मा कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरे वा अंगभंग भए वा अन्य हानि–नोक्सानी वा क्षति पुगे कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई वा पीडितको मृत्यु भएकामा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बदनियत चिताई या जानी–जानी कसैको अंगभंग या हत्या गर्ने जघन्य अपराधलाई अपराध संहितामा राख्नुपर्छ । बांँकी दफाका सम्बन्धमा आचारसंहिता उल्लंघन एवं त्यस बापतको क्षतिपूर्ति सहितको सजाय व्यवस्था देवानी संहिता या काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लंघन शीर्षकमा राख्नुपर्छ ।
चिकित्सक कानुनी उल्झनमा होम्नु वा मुद्दामामिलामा फसाउनु गलत छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको आडमा सम्बद्ध विज्ञहरूद्वारा प्रमाणित नगराई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले चिकित्सकलाई लाखौं क्षतिपूर्ति तोक्ने अनि माथिल्लो निकायले त्यसलाई खारेज गर्ने क्रम चलेको छ । हचुवाको भरमा हुने गरेका यस्ता आदेशले चिकित्सकलाई तनावमात्र दिन्छ । कसैको हित गर्दैन ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालसुब्रमण्यमको विचार सान्दर्भिक छ । उनले भनेका छन्, ‘एक प्रतिशत सम्भावना रहे पनि आस बोकेर बिरामीको सेवामा संलग्न रहने चिकित्सकको मनमा सदैव भय रहँंदा चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्छ ।’ नेपालमा भने चिकित्सकप्रति अत्यन्तै दुर्भाव र पूर्वाग्रह राखिँदै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन चिकित्सा सेवालाई धराशायी पार्ने नियतले आएको छ ।
अपराध संहिता ऐनका दफा २३१ र २३९ प्रति चिकित्सकहरूले सनकका भरमा आपत्ति जनाएका होइनन् । चिकित्सकहरू उपचारको प्रयास गर्दागर्दै बिरामीमा नकारात्मकता पैदा हुनगए यो ऐनमा टेकेर सिधै जेल चलान हुने सम्भावनाले संत्रस्त छन् । विगतमा पनि प्रमाणित नभैकन चिकित्सकमाथि लापरबाहीको आरोप लगाउने, हातपात गर्ने र क्षतिपूर्ति माग गर्ने क्रियाकलाप देखिएका हुन् । उपचारका क्रममा हुनसक्ने घटनालाई संगिन अपराधको कोटीमा राखी जन्मकैद सम्मको व्यवस्था हुंँदा कसरी आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रवाह हुन सक्छ ?
त्यसो त अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ संशोधनले मात्रै चिकित्सा सेवामा दीर्घकालीन सुधार आउन सक्दैन । चिकित्सकलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ । स्तरीय र सहज स्वास्थ्यसेवाका लागि स्पष्ट कानुन निर्माण अपरिहार्य छ ।
उपचार स्थलमा चिकित्साकर्मीलाई आक्रमण र संस्थाको तोडफोड गर्नेलाई तुरुन्तै पक्रिएर अदालत पेस गर्ने र कानुनी कारबाही गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम गर्नुपर्ने चिकित्सकका लागि उचित पारिश्रमिक व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र व्यवहार अनुसार सुरक्षा, सेवा, आचारसंहिता, सजाय र क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट ऐन जरुरी छ । अपराध संहिता ऐनका प्रावधानबाट सिर्जित समस्या सरकार र सत्तारुढ दलको सदाशयता र तत्परताबाटै सुल्झिन सक्छ, सुल्झाउनुपर्छ ।
लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन्।
श्रावण २७, २०७५ डा. ढुण्डिराज पौडेल
काठमाडौँ — बाराकी ३४ वर्षीया महिला छ महिनाअघि उपचारका लागि मकहाँ आइन् । अचानक टाउको घुमाउँदा चक्कर लाग्ने उनको समस्या थियो । घरपायक अस्पतालले सिटिस्क्यान गरिवरी दिएका औषधिले मत्थर नपारेपछि उनी राजधानी आएकी थिइन् । मैले सिटिस्क्यान रिपोर्ट हेरेँ । खराबी थिएन ।
कान सुनाइमा समस्या थिएन । उनलाई टाउको घुमाउन लगाएपछि थाहा पायो– भित्री कानको तल्लो अर्धगोलाकार नलीमा पत्थरजस्तो पदार्थ जम्मा हुने ‘बीपीपीभी’ समस्या भएको रहेछ । ४८ घण्टाको अन्तरमा एकखाले पुन:स्थापक अभ्यास गराउनेबित्तिकै उनको समस्या समाधान भयो । औषधि खानुपरेन ।
नाक, कान, घाँटी क्लिनिकमा रिंगटा या चक्कर लाग्ने बिरामी दिनहुँजसो आउँछन् । तीमध्ये अधिकांशले बाराकी महिलाजस्तै कारण नखोतलीकन औषधि खाएका हुन्छन् । चक्कर लाग्दा कानको श्रवणशक्तिमा ह्रास आउने या कानको भित्री तहमा पैदा हुने गम्भीर प्रकृतिको रोगको समयमै निदान गरिँदा पनि जटिलता पैदा हुने गरेको छ । रिंगटा वा चक्कर लाग्ने समस्याबारे बुझ्नुअघि कारण खोतल्न आवश्यक छ ।
पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँग सामञ्जस्य एवम् उन्मुख हुने क्षमतामा विकृति वा अन्तनिर्हित शारीरिक असन्तुलन पैदा भए स्थिर रहँदा पनि शरीर आफैं वा वरिपरिको वातावरण घुमेको भान हुन सक्छ । वाकवाकी वा बान्तासँगै चक्कर लाग्न सक्छ । शरीर अचानक लड्न या हुत्तिन सक्छ । सन्तुलन पद्धतिमा अन्य जनावरभन्दा मानिसको शरीर अनौठो छ । गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँगको सम्बन्ध पनि अनौठो छ । सालाखाला वजन ६० केजी, लम्बाइ १७५० मिमि र चौडाइ ४५० मिमि भएको मान्छे औसत २५० लम्बाइ अनि १०० मिमि चौडाइ भएका दुइटा खुट्टाको भरमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिविरुद्ध हिंड्ने, उफ्रने गर्छ ।
मुख्य पिण्डको केन्द्रलाई आधार बनाएर शरीर अड्याउन सक्ने या स्थिरता कायम गर्न सक्ने क्षमता सन्तुलन हो । उभिँदा या हिंड्दा त्यसको भारको केन्द्र खुट्टा र पैतालामा पर्छ । यही सन्तुलन पद्धतिले शरीर या टाउको चलिरहे पनि आँखाले वस्तुलाई देखिरहन सक्छन्, शरीर र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणप्रति उन्मुख र समन्वय गरिराखेको हुन्छ । टाउको र शरीर चलिरहँदा गति र दिशा पहिचान भइरहेको हुन्छ । शरीरमा आन्तरिक अवयवले क्रियाकलाप सम्पादन गरिरहँदा पनि शरीरको स्थिरता कायम रहन्छ ।
सचेत अवस्थाको मस्तिष्कले सन्तुलनको समन्वय गरिरहेको हुन्छ । गति र अवस्थाको सूचना सम्बन्धित सूचक अंगहरूबाट सूचना केन्द्रमा प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । भित्री कानमा रहेका आँखा, छाला, स्पर्श, हड्डी, जोर्नी, छाला आदिबाट केन्द्रमा संकेत या सूचना प्रवाहित भइरहेको हुन्छ ।
शरीरका विभिन्न अवस्थाबारे केन्द्रले विभिन्न केन्द्र या अंगबाट सूचना पाएको हुन्छ । शरीरको गति, पृथ्वीसँग शरीर तथा टाउकाको शरीरसँग समन्वयका लागि भित्री कानका अंगहरू (तीन वटा अर्धगोलाकार नली र दुइवटा थैला) क्रियाशील हुन्छन् । कानको भित्री तहमा दुइटा महत्त्वपूर्ण अंग हुन्छन्– १) कक्लियाले कानभित्र प्रवेश गरेको आवाजलाई संश्लेषण गरी विद्युतीय तरंगसहित स्नायु नसाका माध्यमबाट मस्तिष्कबाट ग्रहण गराउँछ । २) तीनवटा अर्धगोलाकार नली र दुई थैलासहितको भेस्टिबुलले टाउकाको घुमाइ र शरीरको सन्तुलन, समन्वय र पृथ्वीसँगको उन्मुखीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । दुवैतिर छुट्टाछुट्टै रहेका यस्ता भित्री अवयवबीच पनि समन्वय भइरहेको हुन्छ । कक्लिया र भेस्टिबुलबीच पनि सम्पर्क हुन्छ । भेस्टिबुलको आँखा, ढाडदेखि मस्तिष्कसँग समेत सम्बन्ध हुन्छ ।
आँखा, हड्डी, जोर्नी, मांसपेशी, भित्री कानबाट प्राप्त संकेतलाई ग्रहण गरेपछि सचेत केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले टाउको र शरीरको घुमाइ एवम् आँखा, जोर्नीलगायत मांसपेशी क्रियाशील बनाउँछ र शरीर स्थिर राखी सन्तुलन कायम गर्छ । चक्के पिङमा घुम्दा, लडाकु विमान चलाउँदा, गाडीमा सवार गर्दा परिवर्तन भइरहने गतिसँग यसैले सामञ्जस्य गर्छ । सन्तुलनसँग सम्बन्धित कुनै केन्द्रीय या परिधीय अवयव या प्रक्रियामा विकृति पैदा भयो भने व्यक्तिमा शारीरिक असन्तुलन पैदा हुन्छ । त्यसलाई चक्कर आउनु भनिन्छ । युवामा ८ र वृद्धवृद्धामा २५ प्रतिशतसम्म कुनै न कुनै प्रकारको असन्तुलन रहेको अनुमान गरिएको छ ।
१. आफू या वरिपरिको वातावरण या पृथ्वी घुमेको अवस्थालाइ भर्टाइगो अर्थात फनफनी घुमाएको भनिन्छ । यो हुनुको मूल कारण (असी प्रतिशत) भित्री कानको रोग हो ।
भित्री कान, कानको नसामा असर परी पैदा हुने चक्करलाई परिधीय भनिन्छ । त्योभन्दा माथिको मार्गमा असर परे केन्द्रीय भनिन्छ । परिधीय प्रकारको भर्टाइगो कडा हुन्छ, जुन थोरै समयको जस्तो केही सेकेन्डदेखि मिनेटसम्म रहन्छ । केन्द्रीय भर्टाइगो सामान्य तर दीर्घकालीन हुन सक्छ । परिधीय भर्टाइगो दोहोरिरहन सक्छ । भर्टाइगोले वाकवाक लाग्ने, बान्ता पनि हुने हुन सक्छ ।
औषधि सेवन नगरी विशेष प्रकारको टाउकाको घुमाइ अभ्यासबाट मात्रै निको पार्न सकिने भर्टाइगो बीपीपीभी हो । यो भर्टाइगो हुनुको मूल कारण हो भित्री कानको उट्टकल थैलीमा रहेको पत्थरजस्तो पदार्थ निस्केर सबभन्दा तलको अर्धगोलाकार नलीमा जम्मा हुनु । यो अवस्थामा कुनै खास दिशामा टाउको घुमाउँदा अचानक चक्कर आउँछ, जुन केही सेकेन्डसम्म रहन्छ । सुनाइमा असर पर्दैन । नाक, कान, घाँटी रोगविशेषज्ञले दुई पटकजति विशेष प्रकारको टाउको र शरीर घुमाइ अभ्यास गराए ठीक हुन्छ ।
कान संक्रमित भई पाक्नु, भित्री कानमा पानी जम्नु, नसा सुन्निनु, ट्युमर हुनुजस्ता कारणले पनि चक्कर लगाउँछ । त्यतिबेला कानको सुनाइमा ह्रास आउँछ । यसको निदान पनि नाक कान घाँटी विशेषज्ञले निदान गर्न सक्छन् ।
२. मुटु या अन्य रक्तसञ्चारसम्बन्धी खराबीले अचानक ढलिन्छ । मुटुका रोगी, रक्तचाप र रगतको मात्रा कम हुने व्यक्ति, नराम्रो या दु:खद घटना सुन्नुपर्दा वा लामो समय धपेडीमा उभिइरहनुपर्दा मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार कम भएर आँखाअघि अँधेरो भई चिटचिट पसिना आउँछ र मान्छे अचानक ढल्न सक्छ । अकालमा मृत्यु पनि हुन सक्छ । यसलाई सिन्कोप या प्रिसिन्कोप या भासोभेगल आक्रमण भनिन्छ । यो अवस्था हुनेबित्तिकै तुरुन्तै सुरक्षासाथ जहाँको त्यहीं सुताई टाउको तल पारेर खुट्टा उचाल्नुपर्छ । नसाबाट झोल पदार्थ दिनुको साथै मुटुको जाँच गर्न‘पर्छ । मुखबाट भने तत्काल केही दिनु हुँदैन ।
३. टाउकामा अप्ठ्यारो हुनुका साथै खुट्टा या ढाडले थेग्न नसकी शरीर ढल्छ । यसको मुख्य कारण वृद्धावस्थाले पैदा हुने स्नायु पद्धतिको क्षयीकरण हो । अल्कोहल सेवन, मधुमेह, परिधीय स्नायु प्रणालीमा विकृतिका कारण गलत सूचना प्रवाहित हुँदा चक्कर लाग्ने गर्छ । वृद्धवृद्धालाई राति चक्कर लाग्ने गर्छ ।
४. डर, तनाव पैदा भई टाउको ठूलो जस्तो, हावामा उडे जस्तो, पानीमा तैरिए जस्तो ‘लाइटहेडेडनेस’ पनि एक प्रकारको चक्कर हो । यो अवस्थामा व्यक्ति अचानक भुइँमा ढल्न सक्छ । माइग्रेन अर्थात अर्धकपालको दुखाइ हुनेमा पनि पटकपटक चक्कर लाग्ने गर्छ । यस्ता बिरामीलाइ टाउको हल्लाउँदा चक्कर आउने, घाममा र चर्को आवाजले असर गर्ने हुन्छ ।
चक्करको मुख्य कारण भेस्टिबुलर पद्धति अर्थात भित्री कान, नसा र मस्तिष्कको सम्बन्धित भागमा पर्ने असर हो । चक्कर आउँदा धेरैजसोमा सुन्ने शक्ति ह्रास हुन्छ । चक्कर आउँदा सुरुमा जेनरल फिजिसियनलाई देखाएर मुटु, रगत, रक्तचाप, मस्तिष्कसम्बन्धी परीक्षण गरिए पनि कानसम्बन्धी चिकित्सकबाट भित्री कान र सम्बन्धित भेस्टिबुलर प्रणाली परीक्षण गर्न‘ अति आवश्यक छ । वाकवाकीसहित कडै किसिमको चक्कर लागे केही दिन औषधि दिन सकिन्छ । कारण पत्ता नलगाई चक्कर दबाउने औषधि लामो समयसम्म खाए समस्या झनै हुन सक्छ ।
डा. पौडेल वीर अस्पतालका ईएनटी विभाग प्रमुख हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:४७